UZuma kumele ashenxe esikhundleni - Mashatile | News24
LAST UPDATED: 2018-11-20, 10:33
UZuma kumele ashenxe esikhundleni - Mashatile
Johannesburg - UMgcinimafa we-ANC uPaul Mashatile uthi uMengameli Jacob Zuma kumele ehle esikhundleni, ukuze kunqandeke ukuthi "kube nezinkunzi ezimbili esibayeni esisodwa".
"Ngokubona kwethu sibona kufanele ukuthi kube khona uguquko," kusho uMashatile ekhuluma kwi-CNBC Africa's Political Capital ngoLwesihlanu.
"Amandla angubhandemtshelekwano, akukwazi ukuthi kubuse abantu ababili ngesikhathi esisodwa. Sifuna ukubona isimo lapho kubusa khona 'inkosi' eyodwa ngaphandle komdonsiswano kanti indlela yokufinyelela lapho wukuthi umengameli wezwe ashenxe esikhundleni," esho.
Ukuphawula kukaMashatile kuza njengoba kulindeleke ukuthi iTop 6 ye-ANC, iholwa nguCyril Ramaposa, ihlangane noZuma kule mpelasonto ukumcela ukuthi agudluke esikhundleni.
OLUNYE UDABA: Amaqembu aphikisayo anokuzethemba ngolokuketula uMengameli Zuma
UMashatile uphinde watshengisa izinkomba zokuthi ubuholi benhlangano bungaphansi kwengcindezi, kulandela umhlangano weNational Working Committee [NWC] ngasekuqaleni kwaleli sonto.
INews24 yabika ngasekuqaleni kwesonto ukuthi amalungu e-NWC anxenxe ukuthi iTop 6 "imqonde ngqo" uZuma imtshele ukuthi ehle esikhundleni, kanti abanye bamile kwelokuthi kumele ahambe ngaphambi kwenkulumo yokuvulwa kwePhalamende ngoLwesine oluzayo.
Umthombo ongaphakathi uthi i-NWC inxenxe ukuthi iTop 6 ibuye izoyibikela ukuthi uhambe kanjani umhlangano noZuma.